Maitiro ekunamira ganda kune tsandanyama | Stylish Men
Alicia tomero | 28/05/2022 10:28 | Kuchengetwa kwega, Kukodzera, kugwinya, Nutrition, Utano
Zvokudya zvakawanda zvinotanga parutsoka rworudyi uye zvigumisiro zvinoguma zvave zvinogutsa zvikuru. Zvisinei, kana kurasikirwa kwehuremu kwave kuchinyanya kutaurwa, zvinogona muviri hauwane chimiro chatinoda. Ganda rinogona kurembera nemuviri nekuti harina kuderedzwa uye mune ino chinyorwa tichakwanisa kupa mamwe mazano nzira yekunamatira ganda kune tsandanyama.
ganda rakasununguka kunoitika mushure mekuonda kwakanyanya, uko zvinoitika kuti kune ganda rakawandisa. Kupedza iyi sagging harisi basa riri nyore uye rinoda nzira dzakajeka uye kuzvipira kwakawanda. Ichi chokwadi chinoitika mukudya pavanenge vakanyanya kuomarara kana pakubata pamuviri. Muzvizhinji zvezviitiko izvi nguva dzose Yakakurudzirwa kuderedza uremu zvishoma nezvishoma uye kwete kamwe kamwe, kuitira kuti muviri uye ganda ribatanidze chimiro chavo zvakasikwa.
1 Maitiro ekunamira ganda kune tsandanyama, kana kudzivirira yakawandisa ganda
1.1 Tanga nekudya kunovaka muviri
1.2 Dzidzira kusimbisa inzwi
1.3 Makirimu ekusimbisa ganda
1.4 Hydrolyzed collagen ye flaccidity
Maitiro ekunamira ganda kune tsandanyama, kana kudzivirira yakawandisa ganda
Zvinowanzoitika kuti munyaya idzi ganda harina nguva yekudzorera chimiro chayo uye inoda nguva yekuenderana nemamiriro ezvinhu matsva, asi kazhinji ganda rakarembera rakaramba riripo uye rinogona kuramba rakaiswa zvachose.
Hazvisati zvapera, hazvisi zvese zvinoitika kumunhu wese, saka kubvisa ganda rinosakadza Hazvigoneki, asi hazvisi nyore zvakare.
Tanga nekudya kunovaka muviri
ari zvokudya zvinovaka muviri achava manyuko makuru okubetsera dzorera elasticity uye kusimba kweganda. Zvokudya zvakanakisisa ndezviya zvine nheyo yakanaka ye collagen uye elastin; tinogona kuzviwana mumakarotsi, salmon, nzungu, arugula, kare, tofu uye soya beans.
Zvimwe zvekudya zvekuwedzera ndezviya zvine vhitamini C uye tinogona kuzviwana mumichero yecitrus yakadai seorenji uye kiwi uye mumiriwo yakadai sebrokoli. The vitamini E Izvo zvakakoshawo uye isu tinogona kuzviwana mune yakazara zviyo, maarumondi, mafuta ezuva uye miriwo mashizha akasvibira.
Kana iwe uchiri kutevera kudya kwakasimba, haufaniri kukanganwa kuti izvi zvikafu inofanira kuva chikamu chezvokudya zvezuva nezuva. Zvibereko, miriwo, mapuroteni uye nyemba hazvifaniri kushayikwa kubva pakudya. Nzungu, hove dzine mafuta, mafuta emuorivhi uye avocado zvine hutano hwakanyanya kubvisa rhythm yakanaka yezvokudya muganda. Zvinorambidzwa zvachose kusadya chikafu chakabikwa kare kana makeke emaindasitiri.
Dzidzira kusimbisa inzwi
Iwo akanakisa maekisesaizi ekunongedza ganda ndiwo Itai maekisesaizi. Isu tinotoziva kuti kusimudza masimbi kunogona kunge kusiri chinhu chinofarirwa nemunhu wese, ndoda vakadzi vasingade kutaridzika zvakanyanya mhasuru. Zvisinei, rudzi urwu rwekurovedza muviri ndirwo runogona kushandiswa zvakanakisisa yeganda rinopera.
Vanhu vazhinji vanotendeukira cardio exercise yekuderedza uremu. Izvo hazvisi zvese zvakaipa, asi isu tinofanirwa kuratidza kuti zvinogona kuita kuti udzike uremu uye usasvike kunzwisa mhasuru. Aerobic kurovedza muviri Inovandudzawo mamiriro eganda uye inosimudzira kupararira kweropa.
Makirimu ekusimbisa ganda
Makirimu anogona kubatsira kunyorovesa ganda kusvika pamwero mukuru, asi hakuna miracle cream izvo zvinogona kuita basa rose. The makirimu akapfuma mualoe vera akanakisa, sezvo iwo ane yakakura moisturizing uye regenerating maitiro.
Massages inzira yakanaka yekusimudzira toning uye elasticity yeganda. Kushandisa kamu cream nechiedza chechiedza zuva rega rega ichava sarudzo yakanaka. Asi kuita masaja maviri ane simba pasvondo zvinenge zvatokwana.
Hydrolyzed collagen ye flaccidity
Kudya kwakapfuma mukati chikafu chakapfuma mu collagen chakanakira, asi mupiro we hydrolyzed collagen uchabatsira zvinhu zvakawanda senge kutaridzika kwemakwinya paganda, kuoma kwayo, kunyorova kwematehwe eganda uye nekudaro zvichabatsira ganda kuti rive rakawanda.
Kutora kuwedzera uku Ichabatsira kukurudzira kugadzirwa kwe elastin uye fibrillin. Ichi ndicho chinhu chikuru cheganda rakakwinya pasina elasticity, sezvo zvichabatsira kunyange kuwedzera hydration.
Muzviitiko zvakanyanyisa uye apo nzira idzi dzakareruka, zviri nani kuenda kunzvimbo iyo vanogona kushandisa nzira yakadai la electrostimulation. Iyi nzira inobatsira flaccidity, kunyanya mudumbu, matako, zvidya uye maoko.
LPG masaja ivo vakanakawo. Inosanganisira mechanized tissue kukanya iyo inoburitsa mafuta asingamiri uye inobatsira kusimbisa ganda. Kurapa kwake ndekwemunhu uye kune mhedzisiro yakanaka.
Semhedziso yekupedzisira, isu tinofanirwa kusimbisa akati wandei akakosha mapoinzi kuchengetedza iro ganda rine hutano kana isu tichiita yakasimba uremu yekudya. Must kunwa mvura yakawanda uye kuwedzera mapuroteni kudya kusimbisazve mhasuru mukurovedza muviri kwezuva nezuva.
Zviri nani kuita Itai maekisesaizi toni uye kusanganisira mukudya chikafu chakapfuma mu collagen uye elastin. Maekisesaizi ezuva nezuva ekupisa macalorie akanakira, asi kana iwe uchida mamwe mazano kunze kwehuremu, unogona kudzidzira tambo kwemaminitsi gumi nemashanu zuva nezuva.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Stylish Varume » Kuchengetwa kwega » Maitiro ekunamira ganda kune tsandanyama